Ozi | December 2019
Na-agbakwunye mbinye aka na email
Mbinye aka na akwụkwọ ozi ndị e zigara site na e-mail na-enye gị ohere igosi onwe gị n'ihu onye natara ya nke ọma, na-ahapụ ọ bụghị naanị aha, kamakwa nkọwa ndị ọzọ kọntaktị. Ị nwere ike ịmepụta ụdị mmepụta dị otú ahụ site na iji ọrụ nhazi nke ozi ọ bụla. Ọzọ, anyị na-akọwa usoro ntinye aka na ozi.
Esi edegara mail ọzọ
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ Ịntanetị nwere nsogbu na nhụsianya nke iji ọtụtụ ọrụ ozi. N'ihi ya, isiokwu nke ịhazi njikọ nke otu igbe ozi email gaa na onye ọzọ, n'agbanyeghị na akụ eji eme ihe, na-aba uru. Ijigharị otu ozi na ibe Ọ nwere ike ijikọ ọtụtụ igbe e-mail na ọrụ ozi.
Ndị ọrụ Intaneti, n'agbanyeghị ogo ọrụ ha, na-echekarị na ọ dị mkpa iziga faịlụ ọ bụla mgbasa ozi, gụnyere photos. Dịka iwu, ọ bụla n'ime ọrụ ozi-ọma kachasị ewu ewu, mgbe ọ na-enwekarị ihe dị iche iche na ntanetị ndị yiri ya, zuru oke maka nzube a.
Esi tinye iPhone site na iCloud
Ọrụ ozi iCloud nke Apple na-enye gị ohere ngwa ngwa, ngwa ngwa ma rụọ ọrụ zuru oke na arụmọrụ na e-mail. Mana tupu onye ọrụ ahụ eziga, ịnata na hazie akwụkwọ ozi, ị ga-ahazi adreesị email @ icloud.com na ngwaọrụ na-agba ọsọ iOS, ma ọ bụ kọmputa Mac.
Kedu ihe nkesa email?
Ọtụtụ ndị ọrụ, chere ihu na mkpa ịhazi otu onye ahịa email ma ọ bụ ndị ọzọ, na-eche, sị: "Gịnị bụ usoro e-mail". N'ezie, iji "gbanye" usoro dị otú ahụ iji rụọ ọrụ na-ejikarị ma jiri ya mee ihe n'ụzọ dị nkasi, ọ dị mkpa ịghọta ihe nke nhọrọ ndị dịnụ kwesịrị ịhọrọ na otú o si dị iche na ndị ọzọ.
Iwu maka ịbanye ozi ịntanetị
A ga-eji aha e-mail mee mgbe ịchọrọ ịnye onye natara ihe nchịkọta kọntaktị ndị ọzọ, ozi ndị ọzọ ma gosipụta ọrụ ọkachamara. N'isiokwu nke taa, anyị ga-agbalị ikwu banyere iwu niile kachasị mkpa maka ịbịanye aka na mpempe akwụkwọ na ihe atụ atụ ole na ole.
Ịdebe faịlụ maka emailing
Ọtụtụ ndị ọrụ ezutewo nsogbu nke izipu faịlụ buru ibu site na e-mail. Usoro a na - ewe ọtụtụ oge, ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ faịlụ ndị dị otú ahụ, ọrụ ahụ na - aghọkarị ihe na - apụghị ime. Iji kwado usoro izipụ onye na-ezigara na nbudata na onye nnata site na iji ụzọ dị iche iche nke belata ibu nke ọdịnaya dị na leta.
Esi eziga email
N'ime eziokwu taa, ọtụtụ ndị ọrụ nke Intanet na-eji ozi-e, n'agbanyeghị agbụrụ afọ. N'ihi nke a, iji nlezianya ejizi ozi dị mkpa maka onye ọ bụla nwere mkpa maka Internet na nkwurịta okwu. Na-ezipụ ozi-e. Usoro nke ide na iziga ozi site na iji ozi ọ bụla bụ ihe mbụ onye ọbụla kwesịrị ịgụ.
Kedu esi eziga faịlụ ma ọ bụ nchekwa site na email
N'ọnọdụ ụfọdụ, gị, dịka onye ọrụ, nwere ike ịnweta iziga data ọ bụla site na iji ọrụ ozi. Na otu esi eziga akwụkwọ ma ọ bụ folda zuru ezu, anyị ga-akọwa n'ihu na nke a. Anyị na-ezipụ faịlụ na nchekwa site na e-mail Na-agwa okwu banyere ịnyefe ụdị data dị iche iche site na iji ọrụ maka ịgbanweta ozi, otu nwere ike ọ bụghị naanị kwuo eziokwu ahụ bụ na enwere ike inwe ụdị ọ bụla na ụdị ọ bụla nke ụdị ya.
Lelee email maka adị
Ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịnwe ike ịlele adreesị email maka ịdị adị. Enwere nhọrọ dị iche iche ịchọta ozi dị otú ahụ, ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ijide n'aka na 100% ziri ezi. Ụzọ nke ịlele email maka ịdị adị Ọtụtụ mgbe, a na-emele email iji chọta aha onye ọrụ ahụ ga - achọ.
Nata ozi SMS
N'ihi usoro ndụ nke oge a, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ohere ịga leta igbe mbata ozi-e, nke nwere ike mgbe ụfọdụ dị oke mkpa. Na ọnọdụ ndị dị otú a, yana ịmezie ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ dị oke mkpa, ị nwere ike ijikọ SMS na-agwa nọmba ekwentị ahụ.
Edere ya na saịtị ọ bụla na mkpa ịdebanye aha, ma ọ bụ ihe ndekọ akụkọ ma ọ bụ netwọk mmekọrịta. Ọtụtụ mgbe, ụdị akwụkwọ ozi ndị a na-abanye na, ma ọ bụrụ na ha adịghị abanye na nchekwa nke Spam na-akpaghị aka, ha nwere ike igbochi iji igbe eletrọniki. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu esi ewepu ozi mail na ọrụ ọrụ email.
Nweghachite paswọọdụ site na email
E-mail bụ maka onye ọ bụla. Ọzọkwa, ndị ọrụ nwere ọtụtụ igbe na ọrụ weebụ dị iche n'otu oge ahụ. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ha na-echezọ paswọọdụ e dere n'oge ndebanye aha, mgbe ahụ, ọ ga-adị mkpa iji weghachi ya. Otu esi eweghachite paswọọdụ site na igbe akwụkwọ ozi ahụ N'ozuzu, usoro nke ịnaghachi nchịkọta koodu na ọrụ dị iche iche adịghị iche.
Na-emekarị, iziga akwụkwọ ozi, ọ bụ iji zụta envelopu pụrụ iche na-eji ụkpụrụ ọkọlọtọ ma jiri ya dịka e bu n'obi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ iji mesie onye ọ bụla na n'otu oge ahụ mkpa nke ngwugwu ahụ, ọ kacha mma iji aka ya rụọ ya. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụfọdụ n'ime mmemme kachasị mfe maka ịmepụta envelopes.
Otu esi achọpụta adreesị ozi-e
N'ime ndị ọrụ Intaneti nakwa, karịsịa, ọrụ nzi ozi, e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-amalite ịmalitebeghị ịchọta adreesị ozi-e tupu. Dabere na njirimara a, anyị ga-agbakwunyekwuo okwu banyere usoro, otu ị ga-esi amata email gị, na nhazi nke a.
Mepụta template akwụkwọ na Mozilla Thunderbird
Taa, Mozilla Thunderbird bụ otu n'ime ndị ahịa ahịa kachasị ama maka PC. E mepụtara usoro ahụ iji hụ na nchekwa nke onye ọrụ ahụ, na-enye aka maka nchekwa nchekwa, yana iji kwado ọrụ site na ozi ederede site na interface dị mfe na nke na-enweghị ike ime. Download Mozilla Thunderbird Ngwá ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ọrụ dị mkpa, dị ka njikwa njikwa ọtụtụ na akaụntụ na njikwa ọrụ, mana ụfọdụ atụmatụ bara uru ka na-efu ebe a.
Idozi nsogbu na ozi-e
Ugbu a, ọtụtụ ndị ọrụ na-eji ngwa igbe eletrik arụ ọrụ. A na-eji ha arụ ọrụ, nkwurịta okwu, ma ọ bụ site na ha ka edebanye aha na netwọk mmekọrịta. O nweghị ihe kpatara nzube gị ji nweta akwụkwọ ozi ahụ, a ka nwere akwụkwọ ozi dị mkpa ka oge na-aga. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ enwere nsogbu na nnata ozi.
Cheta ozi ịntanetị
Ọ bụrụ na iziga ozi-e na mberede site na email, ọ nwere ike mgbe ụfọdụ ka ọ dị mkpa iji wepu ha, si otú a gbochie onye nnata site n'ịgụ ọdịnaya ahụ. Nke a nwere ike ime naanị n'ọnọdụ ụfọdụ, na n'isiokwu a, anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu banyere ya. Cheta ozi ịntanetị. Ka ọ dị ugbu a, nhọrọ a dị naanị na otu ozi ozi, ma ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ akaụntụ Microsoft Outlook.
Otu esi achọpụta paswọọdụ email gị
Mgbe ụfọdụ, onye ọrụ nwere mkpa ịchọpụta ozi paswọọdụ ya. Enwere ike ime nke a ma ọ bụrụ na a zọpụta ya na ihe nchọgharị ahụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ akpaaka. Usoro ndị e nyere na isiokwu ahụ bụ ebe niile ma dị mma maka ndị nwe igbe n'ọ bụla, ọbụna ọrụ kachasị amasị ndị mmadụ.
Kedu adreesị ozi-e ndabere
Mgbe ị na-eji igbe ozi e-mail, ị nwere ike ịchọpụta ugboro ugboro nchebe dị elu nke ọrụ ọrụ mail niile. Iji nye ọbụna ihe nchebe dị ukwuu na saịtị ndị dị otú a, a na-atụ aro ịmepụta E-Mail ndabere. Taa, anyị ga-ekwu banyere atụmatụ nke adreesị a na ihe mere eji jikọta ya.
Ọrụ INDEX na Microsoft Excel
Gbanyụọ nsogbu na visibiliti nke ngwaọrụ USB na Windows 7
Ụzọ maka idozi njehie 3004 na iTunes
Ihe mere Yandex Maps anaghị arụ ọrụ. Ndozi nsogbu
N'oge na-adịghị anya, a ghaghị imelite software ọ bụla. Kaadị vidiyo bụ mpaghara, nke na-adabere na nkwado nke onye na-emepụta ya. Ntugharị software ndị ọhụrụ na-eme ka ngwaọrụ a dịkwuo mma, na-edozi aha na ike. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ enweghị ahụmahụ na melite ngwanrọ nke akụkụ PC, ọrụ dị otú a dị ka ịwụnye mbipute ọhụụ kacha ọhụrụ nwere ike isi ike. GụKwuo
Ụzọ iji mee ka keyboard na laptọọpụ na Windows 10
Ibudata egwu site na VKontakte maka gam akporo